Naseho ny : 27 jona 2020
Rehefa nilazan'i Dera an-taratasy ireo ray aman-dreniny fa teraka i Vola, dia niakatra izy mivady, ary niaraka tamin'i Soa sy ny rainy. Tsy afa-pahasahiranana mihitsy i Dera fa nitombo indray aza. Nitohy indray ny fikorontanan-tsaina, saingy tamin'i Vola kosa, dia tsy nisy fiantraikany taminy izany, fa vao mainka nampisehoany ny maha renim-pianakaviana tompon'andraikitra azy.
Naseho ny : 25 jona 2020
Naneho fahasarota-piaro amin'i Vola noho ity vahiny tsy nampoizina ireo mpanampy roa vavy ao amin-dry Dera. Noheverin'izy ireo fa fisoloana toerana an'i Vola mihitsy aza no anton'izao fiantranoana tampotampoka izao. Hany ka izay zavatra rehetra nitranga, nanaovan'izy roa vavy andrimaso tsy mikimpy, eny na dia efa hatrany am-pandriana matory aza.
Pejy 10 amin'ny 66